ဒူဘိုင်း Mall ကယောဘ - တစ်လက်လီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုကြည့်ဖူး🥇
ဒူဘိုင်း Mall ကယောဘ
ဒူဘိုင်း Mall ကယောဘကဘယ်မှာအခြားသောအရပ်ဖြစ်ပါသည် ကလူဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Dubai Mall အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အမြဲတမ်းအသစ်သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူသစ်တစ်ခုနေ့ရက်။ အခြားသူအတွက်ဘာမျှမထံမှ သဲနှင့်ဒူဘိုင်းသဲကန္တာရသာ။ အတိအကျ, အသစ်တစ်ခုကိုဒဏ္ဍာရီစျေးဝယ်မြင့်တက်။ ထိုအသေချာအသစ်သောစီမံကိန်းများအတွက်ကျိန်းသေရှေ့ဆက်ထ။ အထူး ယူအေအီးအတွက်လူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုတစ်ဦးကကုန်တိုက်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါစဉ်ပြီးနောက်, တစ်စုံတစ်ဦးကအဆိုပါဒူဘိုင်း Mall ကစျေးဝယ်စင်တာအမည်ရှိ။ ထိုအချိန်မှစ. တွေအများကြီး အွန်လိုင်းကဒီကုမ္ပဏီရှာဖွေနေကလူ။ ထို့အပြင်တောင်မှသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပိုင်းလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့အနာဂတ်အလုပ်ခွင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အရပျဟာအံ့သြဖွယ်မူပြောင်းခြင်းတွင်တည်ရှိသည်။ အဖြစ်မှန်အတွက်စီးပွားရေးစင်တာကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတစ်ခုနှင့်တူပုံရသည် အလုပ်စတင်ရန်ဂုဏ်သိက္ခာအရပျ။ ဒူဘိုင်း၏ Downtown ။ ဤအရပ်ဌာနအလားအလာအလုပ်ရှင်နှင့်ပြည့်ဝ၏။ ထိုအသေချာအသစ်တစ်ခုလူတစ်ဦးကိုစတင်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ဇိမ်ခံသောနေရာများအတွက်။ ထိုကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ အမြဲတမ်းပိုပြီးဂုဏ်သိက္ခာမြင်၏။ အထူးသဖြင့်အတွင်း သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်.
ဘို့ Dubai Mall အလုပ်ဗီဇာ လိုအပ်လား
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန်။ အဆိုပါဗီဇာကံမကောင်း Dubai Mall အတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအဖို့ ဒူဘိုင်းများအတွက်လျှောက်လွှာပေးပို့ သငျသညျဗီဇာအဆင်သင့်ရှိခြင်းလျှင်ကုန်တိုက်သာသဘာဝကျပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, application တစ်ခုအဆင်သင့်ရဖို့။ သင် ... ရမည် အလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေ။ အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စာတမ်းများ။ အထူးယူအေအီးအစိုးရအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်, သငျသညျရှိရဖို့စိတ်အားထက်သန်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကြိမ်အထိပြုလုပ်ကြီးမားအလုပ်ခွင်ဖြစ်ပါတယ်။ တထောင်အများအပြားဆိုင်များနှင့်ဒေသခံကုမ္ပဏီများသည်။ Dubai Mall အတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ငှားရမ်း။
သူတို့က အရောင်းဝန်ထမ်းရှာဖွေနေ, အဖြစ်မန်နေဂျာ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, အများဆုံးရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူ Dubai Mall ၌တည်၏။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကျော်လျှောက်ထား။ နှင့်ရောက်ရှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ Mall သည်သူတို့၏အီးမေးလ်တွင်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ကိုသတိရရပါမည်, အကောင်းဆုံး applications များ။ Are တစ်ထမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ်ငှားရမ်းမန်နေဂျာဖော်ပြခဲ့တဲ့သာအခါ,။ ဒါကယေဘုယျအားဖြင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားပါ။ မည်သည့်အချက်မှာ ငှားရမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရောက်ရှိရန်ကြိုးစား။ နှစ်ဆယ်ငါးထောင်ကျော်ရှိပါတယ်ကြောင့်, ဒူဘိုင်းအတွက်အလားအလာရှိသောလျှောက်ထားသူနေ့စဉ်နေ့တိုင်း။
အရောင်းလက်ထောက် Dubai Mall အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ
ရရန်အလွယ်ကူဆုံးအနေအထား Dubai Mall အတွက်အရောင်းလက်ထောက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအစိတျထဲတှငျနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ခေါ်ဆိုခစင်တာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အချို့သောသုတေသနပြုတော်မူပြီ။ ထိုအထဲကတစ်ခု သငျသညျရနိုင်အလွယ်ကူဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒါဟာဖောက်သည်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနေအထားက, တံဆိပ်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, Dubai Mall အတွက်ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရှိပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများအလုပ်အကိုင်စတင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာလက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏အတော်ကြာအမျိုးအစားများ။ ဥပမာအားဖြင့်, မိန်းမတို့အဘို့စားဆင်ယင်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အားကစားဆိုင်များ Adidas အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် Nike ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုစုဆောင်းကုမ္ပဏီများမှဒီလို။ ပုရွက်ဆိတ်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရရန်ကြိုးစားနေ ဒါကြောင့်ထက်မြက်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်.
အဆိုပါရောင်းချမှုလက်ထောက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ။ လုပ်ဖို့အမှုအရာတွေအများကြီးပါဝငျသညျ။ သငျသညျအမွဲဖောက်သည်ကျေနပ်မှုထက်ပိုမိုကြောင်းသေချာစေရန်ရှိသည်။ ထိုမှတပါး, ဖောက်သည်များစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုအမြဲဖြစ်ပါသည် လူတန်းစားအတွက်အကောင်းဆုံး။ ထိုအခါစျေးဝယ်စင်တာ၌မိမိတို့နေထိုင်။ အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ဆိုင်ထဲမှာသူတို့ပြန်လာနိုင်အောင်ပျော်စရာပါပဲ။ နောက်ထပ်အချက် အာရုံစူးစိုက်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုရောင်းဖို့အဓိကသော့ချက်မယ်လို့အမှုအရာကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်လို့ပဲ။ ဒါကြောင့်, Dubai Mall ထဲမှာအရောင်းလက်ထောက်အကြံပေးအလုပ်အကိုင်များအဖြစ်။ သငျသညျ t ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဏစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးပြန်လုပ်ကူညီပေးသည် Dubai Mall အတွင်းရောင်းအား။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အလှည့်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပိုက်ဆံထုတ်ပေးပါတယ်။ သင်တစ်ဦးလက်လီမှသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ် မန်နေဂျာသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး.
ဒူဘိုင်း Mall ကအကြီးဆုံးဖြစ်သနည်း
ကောင်းပြီ, ဒီဒူဘိုင်း Mall ကဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး?။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သေချာများအတွက်ကမ္ဘာကြီးအပေါ် 23 ဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံး။ ကအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်လက်လီနဲ့ဖျော်ဖြေရေးခရီးလမ်းဆုံးသေချာသည်။ အထူးသဖြင့်လူသိများ တစ်ခရီးသွားနှင့်နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ ဒူဘိုင်းအကြီးမားဆုံးစျေးဝယ်စင်တာ။ ကျိန်းသေကြိုဆို ထက်ပိုမို 80 သန်းဧည့်သည်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ထိုအလုပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့အာကာသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းပြည်တွင်းနေရာများ ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ဖို့နီးပါးခြောက်လသန်းစတုရန်းမထိုက်မတန်၏ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သစ်စီမံကိန်းများကိုကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အတော်ကြာကုမ္ပဏီများသည်ဒူဘိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြသည်။ အသစ်သောဆိုင်များနှင့်လက်လီနေရာများဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အားလုံးဒူဘိုင်း Mall ကစျေးဆိုင်စာရင်း။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိအဆိုပါ Dubai Mall ကသန်းစတုရန်းပေများအတွက်နီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့သစ်ကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်ငှားရမ်းဖို့ ပို. ပင် leaseable ကြမ်းပြင်ရှာကြ၏။
ဥပမာအားဖြင့်, စျေးဝယ် 1,300 လက်လီဆိုင်များတွင်ကျော်ရှိပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ဟိုမှာလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ CV အပေါ်တော်တော်များများသောနေရာများသို့သွားရောက်။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, ရာပူဇော်သက္ကာကိုကုမ္ပဏီများအချို့ကိုပင်အင်တာဗျူး၌ကျင်လည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်လျှင် သငျသညျလွန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာများ။ 200 စားသောက်ဆိုင်နေရာလွတ်ကိုကျော်ရာပူဇော်သက္ကာဘို့။
အဆိုပါ Mall ကနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများ
အဆိုပါ Dubai Mall, အဖြစ်မှန်ထဲမှာ, ကမ်းလှမ်း အကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ဒေသခံဒူဘိုင်းလုပ်သားများမှ။ အထိ အိန္ဒိယကနေနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများ နှင့်ပါကစ္စတန်။ အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နီးပါးသောလူမြိုး။ ဤရွေ့ကား, စိတျထဲတှငျ, လက်လီရောနှောပေါင်းစပ်အတွေ့အကြုံကိုအတူ။ ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများပေးခြင်း။ အဆိုပါကမ္ဘာ့အဆင့်မီထမင်းစားခန်းဖျော်ဖြေရေးနှင့်အပန်းဖြေဆွဲဆောင်မှု။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲ တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကျွမ်းကျင်သူများအကြံပေး။ အထူးသဖြင့် Mall အတွင်းကြီးမားသောကုမ္ပဏီများမှအတွင်း။ အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့တက်ရှိလူများ၏အနည်းငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာထားရှိအဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုတုံ့ပြန်ချက်အပြုသဘောဖြစ်ခဲ့သည်။ သောကြောင့်အများကြီး၏ အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ အတော်လေးမြန်ဆန်စွာရာထူးတိုးတဲ့။ Wich ဖြစ်ပါသည် အနာဂတ်လုပ်သားများအတွက်အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးခြင်း ဒူဘိုင်း Mall ကအတွင်းပိုင်းအလားအလာကုမ္ပဏီ၌တည်၏။
Dubai Mall အတွက်ဖက်ရှင်အတွက်ဂျော့ဘ်
အလုပျသမားမြားအတှကျအခြားသောအရပ်တစ်ဖက်ရှင်ဌာနဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှိပါတယ် အတော်ကြာအဖွဲ့အစည်းများ သူကြီးတွေရိပ်သာလမ်းကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာ။ မြို့သူမြို့သားနေ့တိုင်းကြီးထွားလာကြောင်းပင်ဖြစ်သည် ?. ဥပမာအားဖြင့်, ရှိပါတယ် ကြွယ်ဝသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလူများအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများ။ ဖက်ရှင်ကဏ္ဍအတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီများသည်။ Are ယခုစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာလန်းစပြုပြီ။ ယခုအချိန်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများအဆိုပါ Dubai Mall ထဲမှာရာထူးတိုးချဲ့။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အနုပညာပညာရေးနှင့်အတူလူ အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိ။ လက်လီစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဥပမာ။ သေချာသည် စိတ်ဝင်စားတစ်ခုခုရှာတွေ့။ ယူအေအီးမတိုက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်။ ဒီထားရှိစတင်ဖက်ရှင်မြို့တော်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းများအတွက်.
နောက်ထပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အစိတ်အပိုင်း သင်တစ်ဦးဇိမ်ခံဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်စီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်။ ကျိန်းသေသူတို့ထဲကတဦးတည်းရတနာဆိုင်များရောင်းချပေးဖြစ်ကြသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိုင်များတွင်တစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ် အသစ်ကအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်း။ နယူးရိုးရာအာရပ်အဝတ်အစားကုမ္ပဏီများမှလည်းအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများရှာကြ၏။ ထို့အပြင်လက်မှုပညာစတိုးဆိုင်များကို manual အလုပျသမားရှာကြ၏။ နှင့်အခြားအကြား ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကုမ္ပဏီများက ကုန်တိုက်။ တစ်ဦးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အမှုဆောင်အရာရှိ၏တွေအများကြီး။ တဖန်သင်တို့ဖက်ရှင်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ကြလိမ့်မည်။
Dubai Mall မှာအကောင်းဆုံးကဘာလဲ?
အကောင်းဆုံးကိုကုန်တိုက်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုမှာ။ သူတို့စတင်ကတည်းက ကြည့် open-ဝေဟင် streetscape ဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်ဖို့ထိုက်တန်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်း Mall ကအံ့သြဖွယ်အမှုအရာတွေအများကြီးကမ်းလှမ်းမယ့်ရွာရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂျင်းအမှတ်တံဆိပ်၏ကျော်ကြားမှုတနင်္ဂနွေစုဆောင်းခြင်းတဦး။ ထိုမှတပါး, ကုမ္ပဏီများသည်သင်တို့အဘို့အကာပြင်ပအသိုင်းအဝိုင်းဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်။ သငျသညျသစ်ပင်-စီတန်းဖို့အတွက် walkway နှင့်အတူခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ။ သို့သော်ငြားလည်း, ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိပါတယ်။ အတော်ကြာဖောက်သည်ယူဖို့အဆင်သင့်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ Dubai Mall အတွက်အလုပ်အကိုင်အဖြစ်နိုင်သမျှ seams ။ အဆိုပါကတည်းက အသစ်တိုးချဲ့စီမံကိန်းတွေထမြောက်တော်မူကြပါပြီ။ အဆိုပါဖက်ရှင် Avenue ဒူဘိုင်းစီးတီးမှသိသိသာသာဂုဏ်သိက္ခာတိုးတက်မှုပေးပါသည်။ ထိုအခါပရီမီယံစျေးဝယ် options များဖြစ်ကြသည် ဧည့်သည်များအတွက်ဖွင့်လှစ်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ check လုပ်ထားခဲ့ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်နိုင်။ 150 သစ်ကိုဇိမ်ခံစျေးဝယ်ကျော်နှင့်အတူဥပမာ။ ဒူဘိုင်းကုန်တိုက်ထဲမှာအလုပ်အကိုင်အဘို့ဖြစ်နိုင်ချေလစဉ်လတိုင်းမြင့်တက်နေသည်။ ထိုမှတပါး, သင်တစ်ဦးဝန်ထမ်းအဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည် စားသောက်အတွေ့အကြုံများစားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးနှင့်အတူ။ လူအားလုံးတို့သည် Dubai Mall ကျော်, သငျသညျ, အတော်ကြာကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာတှေ့နိုငျ။ ဥပမာတစ်ခုမှာ flagship စျေးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်များသစ်အယူအဆမြင့်တက်လာနေကြပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်စီးပွားရေး၏။ ဒူဘိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဇိမ်ခံစျေးဝယ် destination သို့ဖြစ်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
ဒူဘိုင်း Mall က ဆွဲဆောင်မှု
ဒူဘိုင်း Mall ကပြီးပြည့်စုံတည်နေရာ၌တည်ရှိ၏။ ထို့အပွငျဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာကြီးကို-class ကိုဒူဘိုင်း Aquarium features & ရေအောက်တိရစ္ဆာန်ရုံ။ ထိုအသေချာဘို့လေးတွေကမေတ္တာရှင်နေကြတယ်။ ဒါ့အပြင်ဤအရပ်ဌာနကိုမိသားစုအချိန်များအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေနေသတ္တဝါများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ featuring အဆိုပါ Mall က။ ထို့အပြင်တစ်ဦး 270 ဒီဂရီဗျူဟာလမ်းညွှန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလည်းမရှိ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဤအံ့သြဖွယ်ရာအရပျပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဥပမာတစ်ခုမှာ, VR Park က။
အဆိုပါအမည်အပြည့်အစုံကထူးခြားတဲ့ virtual reality ဆွဲဆောင်မှုလျှင်။ ကလေးတွေဒိုင်နိုဆောတစ်ဦးဘဝကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိ။ သူတို့ကမြင်သင့်တယ်နီးပါးလမျး၌။ ဒူဘိုင်း၏နောက်ထပ်အခြမ်း ကုန်တိုက်။ ဒါဟာအပြည့်အဝလိုက်ဖက်မိသားစုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ KidZania ပါဝင်သည်။ အတော်ကြာဆန်းသစ်ရှိပါတယ် သားသမီးရဲ့ကစားခိုင်ခိုင်လုံလုံနှင့်အယူအဆ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ Reel ရုပ်ရှင်ရုံများ megaplex လည်းအံ့သြဖွယ်နောက်ခံပေးခြင်း။
အဖြစ်အိုလံပစ်အရွယ်ဒူဘိုင်းရေခဲပြင်ကိတ်ကွင်း။ အဘယ်မှာရှိအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့နွေးထွေးပူသည်။ ကုန်တိုက်၏အတွင်းပိုင်းကအေး Cool ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံယူအေအီးဧည့်သည်များနှင့်နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များအတွက်။ ဒူဘိုင်းမောလ်များဟာ 5-ကြယ်ပွင့်ပရီမီယံဟိုတယ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် Dubai Mall အတွက်အလုပ်အကိုင်အတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ။
က Dubai Mall ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရကျိုးနပ်လား?
EMAAR Dubai Mall တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဘို့နိဂုံး
ဟုတ်ပါတယ်, Dubai Mall အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးပေးခြင်း။ စိတ်၌ဤအတူသင်တို့က, ကျိန်းသေသင့် လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုကြည့်ကြ။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးလက်လီအကောင်းဆုံးအခန်းအလွတ်ဖြစ်သည်။ နှင့်သင့်အသိပညာသည်။ Dubai Mall ထဲမှာဂျော့ဘ်, get မှလွယ်ကူသောမရှိကြပေ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, အဆိုပါ EMAAR, ကုမ္ပဏီငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, စိတျထဲတှငျအသစ်တစ်ခုနှင့်တည်ဆဲစျေးဝယ်စင်တာအဘို့နှင့်အတူ။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်ရ။ အလုပ်အဖွဲ့ ထိုကဲ့သို့သော EMAAR အဖြစ်ထိပ်ဆုံး-rated ကုမ္ပဏီများအတွက်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီများအတွက်ကြည့်ကြပါ။
ဒါကကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါတယ် အမ်းမရိတ်အတွက်အကြီးအကျယ်တိုးချဲ့။ ဤရွေ့ကား, စိတျထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အတူ။ ကြီးထွားလာအများအပြားစီမံကိန်းများနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူး။ ထိုအသေချာသည်ဒူဘိုင်း Mall ကလက်ရှိဆဲဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ကြီးထွားလာချဲ့ထွင်ဘို့။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီပိုပြီးလူတွေကြိုဆိုတဲ့နည်းလမ်းရှာဖွေနေ။ ဥပမာအားဖြင့်, အောက်ပါနှစ်များတွင် 100 သန်းဧည့်သည်ကိုကျော်။
ထိုမှတပါး နောက်ထပ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ကျိန်းသေအဆိုပါကုန်တိုက်ရဲ့လက်လီအသစ်ကနေရာလွတ်တိုးမြှင့်။ ပြီးအများကြီးပိုကျွမ်းကျင်သူများလိမ့်မည် အသစ်သောရာထူးများအတွက်လျှောက်ထား။ ဒီတော့ပိုပြီးကလူ, သူတို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖျော်ဖြေရေးကမ်းလှမ်းမှုကိုဖမ်းပြီး။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ရှိသည်နှင့်လျှောက်ထား တစ်ဦးလက်လီအကောင်းဆုံးများအတွက် ယူအေအီးအတွက်အခန်းအလွတ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုများအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ သငျသညျယခုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။